Arzentina : Mpianatra sekoly ambony mampiasa lahatsary aseho aterineto hitaterany ny olana mianjady aminy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Avrily 2008 0:15 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, বাংলা, Shqip, Español, English
Te-hisintona ny mason’ny famoaham-baovao[es] hilazany ny olana mahazo azy ny mpianatry ny sekoly ambony arzantina tamin’ny fametrahana lahatsary tao amin’ny YouTube : mila trano lehibe afaka ianarana ry zareo. Amin’izao fotoana izao dia any amin’ny sekoly fanabeazana fototra no mamonjy sekoly ny Ipem 112 “César Iñíguez Montenegro”, any Sebastián Elcano, tanàna kely avaratry Cordoba renivohitry Argentina (angaha moa tsy Buenos Aires ?). Na izany aza, satria moa ifandimbiasana ny mampiasa ny sekoly dia voatery mianatra amin’ny takariva (mena masoandro) ny mpianatra sekoly ambony, tahaka ireny hoe sekoly amin’ny alina no atao.
Nandray andraikiny amin'ity raharaham-panorenana ity ny ray aman-drenin’ireo mpianatra ireo tamin’ny faran’ny volana marsa, ary nanapa-kevitra fa tsy hiala ry zareo mandrapahitany ny fitaovana sy ny fanomboham-panorenana nampanantenaina, na farafaharatsiny fantatra mazava ny andro hanombohana ny fananganana ny trano. Nampanantenaina manko ry zareo fa hahazo ny sekoly amin’ny volana marsa. Mianatra haifiarahamonina sy fifandraisana ny mpianatra ao amin’ny INEM ka nandefa fandaharahana (matetika) ho ana famoahambaovaon’ny fahitalavitra ao an-toerana, ary ny votoatin’izany (fandaharana izany) no napetraky ry zareo amin’ny tranonkala mba ho maro no mahalala. Ary ny tena marina, dia tamin’ny alalan’ny fantsontsary YouTube najoron’izy ireo no nielezan’ny vaovao nanerana an’i Arzantina.
Amin’io lahatsary amin’ny teny espaniola io no ahitanao ny tenin’ny ray amandreny niandry 20 taona ngarangidina ny hananganan’ny governemanta ny sekoly IPEM 112, no iresahan’izy ireo ny naneken’ny talen’ny sekoly fanabeazana fototra Carpani Costa mba hifandimbiasana amin’ny mpianatra amin’ny sekoly ambony ny trano, ary handray andraikitra tanteraka sy tsy hana-pahataperana ry zareo ry zareo (sa ve hoe hidongy ny sekolin’ny olona ?) mandra-pitsangan’ny trano nampanantenaina.